JACK MA's LIFE & HISTORY — Steemkr
JACK MA's LIFE & HISTORY
babysister42 in history
JACKMA ဂျက်မားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အလီဘာဘာလုပ်ငန်းစုကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့၊ တရုတ်ပြည်မှာ အင်တာနက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ အောင်မြင်သူတွေမှာ စမယ်နော်...
JACKMA ဟာသူတပါးနဲ့ မတူ၊ ထူးခြားတဲ့ ဘ၀ရှုမြင်ပုံတွေနဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဂျက်မားရဲ့ လူငယ်ဘ၀ဖြတ်သန်းခဲ့မှုမှာ ထူးခြားတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေက နောင်တချိန် သူရဲ့ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ #အလုပ်တစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တတ်ခြင်း ဂျက်မားဟာ အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်လာဖို့ကို ၉နှစ်တိုင်တိုင် ကြိုးစားသင်ယူလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မနက် ၅နာရီမထိုးခင် အိပ်ယာထ၊ တိုးရစ်တွေရှိနေတဲ့ ဟိုတယ်တွေကိုသွား၊ သူတို့ကိုလည်ပတ်တဲ့နေရာတွေကို လိုက်ပို့၊ လိုက်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ ပြန်ရတာက တိုးရစ်တွေက အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ စကားပြောကို အလကားပြန်သင်ပေးခဲ့ကြတာပါပဲ။ အဲဒီမှာ ထူးခြားတဲ့အချက်က ရာသီဥတု ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေပါစေ သူက မပျက်မကွက်ပဲ နေ့တိုင်းသွားနေခဲ့တာပါ။ #အပေးအယူ သဘောတရားကို နားလည်ခြင်း ဂျက်မားက လိုက်ပို့ပြီှးရှင်းပြရတာတွေအတွက် စရိတ်မတောင်းတော်တော်ကောင်းတာပါ...။
သူဟာတော်တော်ကြိုးစားသောသူ...ခံခဲ့ဘူး။ သူသာ တောင်းခံခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ လိုလားမှုဖြစ်တဲ့ နေ့တိုင်းအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ထိတွေ့မှု ရဖို့ဆိုတာ ဘယ်လွယ်နိုင်ပါမလည်း။ တစ်စုံတစ်ခုကိုလိုချင်ရင် ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကိုနားလည်သလို ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာအတွက် ဘယ်အရာကို ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သိနေခဲ့ပါသေးတယ်။ #မိမိစိတ်ဝင်စားရာကို လေ့လာသင်ယူရာတွင် အရှက်၊ အကြောက်တရားကို ဘေးဖယ်ထားနိုင်ခြင်း ဂျက်မားဒီလိုမျိုးတိုးရစ်တွေကို လိုက်ပို့ရာမှာ ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေရှိသလို မယုံကြည်ပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂျက်မားဟာ သူစိတ်ဝင်စားရာ ဘာသာရပ်ကို လေ့လာရာမှာ အရှက်တရား၊ အကြောက်တရားတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ကိုယ်လိုချင်ရာ၊ လိုအပ်ရာကိုပဲ အာရုံစူးစိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ #ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းခြင်း ဂျက်မားရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမှုတွေကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေခဲ့သလိုသူ့ကိုမှီဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ယယယယ...။
သူနဲ့တူတူထိုင်နေတာကတော့ဂျက်လီ...အသက်(၂၀) ကျော်အရွယ်မှာပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ သူသာ ဒီအခွင့်အရေးကို မရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်ဖို့ ကိစ္စ အကူအညီတောင်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ လက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ တွန့်ဆုတ်မှုတွေ ရှိရင် ရှိနေခဲ့မှာပါ။ သူ့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမှုတွေဟာ နောင်တချိန် တက္ကသိုလ်ပညာရေး ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ဖို့နေရာမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရာမှာလည်း တပည့်တွေစီကနေ အထောက်အကူတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ #အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရသော်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျခြင်း ဂျက်မားဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး စာမေးပွဲမှာ သချာင်္ (၁)မှတ်ပဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် တတိယအကြိမ် ဖြေဆိုရာမှာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ ကျရှုံးမှုကို စိတ်ဓာတ်မကျ၊ နောက်လှည့်မပြန်ပဲ ကြိုးပမ်းတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက နောင်တချိန် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာမှာ အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံလာခဲ့ဂှက်နှစ်ယောက်ပေါ့...။
သူတို့သုံးယောက်ကိုလဲသိမှာနော်...ရာမှာလည်း ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။ #အားနည်းချက်ကို ဖြည့်စည်းတတ်ခြင်း ဂျက်မားဟာ တရုတ်သိုင်းပညာ ဖြစ်တဲ့ ထိုက်ချိသိုင်းကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်မြောက်ပါသေးတယ်။ သူ့ကို ရန်စအနိုင်ကျင့်မှုတွေကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အနေအထား၊ ပြိုင်ဖက်တွေကို အနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ အနေအထားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လူကောင်သေးပါတယ်။ အဲဒီလိုအားနည်းချက်တစ်ခုကို ထိုက်ချိသိုင်းတတ်မြောက်မှုနဲ့ ဖြည့်စည်း ကာကွယ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ #အရည်အချင်းတစ်ရပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနိုင်ခြင်း ဂျက်မားဟာ အရည်အချင်းတွေ အများကြီးနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့အရည်အချင်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ အသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဒီအရည်အချအထူးပြောပြနေစရာကိုမလိုလောက်အောင်ပဲ။
Jack ma င်းကို အသုံးချပြီး ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီထောင်ရာက စတင်ပြီး စီးပွားရေးလောကထဲကို ၀င်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာလည်း ဒီအရည်အချင်းကြောင့် အမေရိကသွားဖို့အခွင့်အလမ်းပေါ်လာခဲ့သလို အင်တာနက်ဆိုတာကို စတင်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိလာခဲ့တာပါ။ #ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိခြင်း သူဟာ ပညာရေးမှာ ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးမှာ ဖြစ်စေ အလွယ်တကူနဲ့ အောင်မြင်လာခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်း ကြုံရသလိုပဲ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိခြင်းပါ။ မအောင်မြင်ဘူး… အိုကေ… ထပ်ကြိုးစားမယ်… တစ်ချိန်မှာ အောင်မြင်လာမယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးပါ ဂျက်မားရဲ့ ငယ်ဘ၀ကို လေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာ သူတပါးတွေထက်ဆင်တယ်နော်တော်တော်လေး။
သူတို့ကကြိုးစားကျတယ်တော်တော်လေး...ထူးချွန်လွန်း၊ ထက်မြက်လွန်းတဲ့ လူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်လူတွေလိုပဲ အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ သာမန်လူတွေနဲ့ ကွာခြားသွားပြီး သူ့ကို အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ အချက်ကတော့ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့လာရင် လက်မလျှော့တဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ကိစ္စတစ်ခုကို အာရုံစူးစိုက်လေ့လာမှု၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကော…. ကိုယ်ဝါသနာပါ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာတစ်ခုကို ၉နှစ်လုံးလုံး တစ်ရက် မပျက်ပဲ အာရုံစူးစိုက် လေ့လာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံးမှုတွေကို အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာအဖြစ်ယူပြီး မဆုတ်မနစ်နဲ့ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် …မအောင်မြင်မှုပဲ ရှိပါဦးမလားခင်ဗျမွေးရာပါဦးနှောက်ချို့ယွင်းမှုမရှိရင် လူတွေဟာ ဘယ်သူ့ထက်ဘယ်သူကမှ ပိုပြီးဥာဏ် မကောင်း ကြပါဘူး။ သတ္တိကောင်းတဲ့သူ၊ သတ္တိပျိုးထောင်ရကောင်းမှန်းသိတဲ့သူ၊ ကြာရှည်ခံအောင်လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့သူဟာ စာမေးပွဲလို အသေးအဖွဲကိစ္စမျိုးမှာသာမဟုတ်တော်တော်ဆိုမှတော်တော်လေးကိုကြိုးစားတာလေ...။
မိုက်တယ်မှတ်လား...အရာရာမှာ အောင်မြင်နိုင်ကြတာပါပဲ ။ ဒါကြောင့် လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်း သတ္တိမျိုးဆိုတာက လက်ဝှေ့ထိုးနိုင်ချိန်လောက်မှာပဲ လိုအပ်တာ။ လက်ဝှေ့ ထိုးနိုင်သေးတဲ့ အချိန်လောက်ထိသာ လိုအပ်တာ။ “ဦးနှောက်စိန်ခေါ်မှု” ကိုလက်ခံဝံ့တဲ့သတ္တိဆိုတာက သေသည် အထိသုံးစွဲကြရမှာ။သတ္တိမရှိတဲ့သူဟာ ဘာမှမလုပ်ဝံ့ဘူး။ ဘာမှမလုပ်ဝံ့ရင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် သတ္တိဆိုတာဟာ အရာရာတိုင်းရဲ့ အကြောင်းခံကြီးဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သေချာသဘောပေါက်ထား သင့်ကြပါတယ်။ သတ္တိန့ပဲ တ်သက်ပြီး စပိန်လူမျိုးစာရေးဆရာကြီး “ဆာဗင်တီး” ပြောဖူးတာကို သတိရလိုက်မိပြန်တယ်။ သူပြောတာက . . . စည်းစိမ်၊ ဥစ္စာ ဆုံးရှုံးလျှင် များစွာဆုံးရှုံး၏။ ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလျှင် ပို၍ဆုံးရှုံး၏။ သတ္တိဆုံးရှုံးလျှင်ကား အားလုံးကုန်ပါလေပြီ တဲ့ ။ လောကကြီးမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာဟူသမျှဟာ “ကာယသတ္တိ၊ စာရိတ္တသတ္တိ” နှစ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေ ဖန်တီးခဲ့တာတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းမိုက်နေရမယ်လေ...
ဒါ JACK MA ပဲလေ...သတ္တိကောင်းတဲ့ သူတွေ ကိုသာလျှင် သြဘာပေးကြတယ်။ လောကကြီးမှာ သတ္တိကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်သာလျှင် နေရာရှိတယ်။ သတ္တိရှိရင် ရှေ့ တက်ပါ။ သတ္တိမရှိရင် နောက်ဆုတ်ပါ။ နေရာဖယ်ပေးပါ။ သစ်သားထဲကို သံချွန် ရိုက်သွင်းလိုက်တော့ ၀င်သွားတာဟာ သစ်သားက ပျော့လို့ မာတဲ့ သံချွန်အတွက် နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုပါ။ မင်းဟာ မာသလား၊ ပျော့သလား။ မာရင် နေရာယူပါ။ ပျော့ရင် နေရာ ဖယ်ပေးလိုက်ပါ။
လိုချင်ဆန္ဒပြင်ပြစေတဲ့ နည်းလမ်းများသောအားဖြင့် စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာတွေက ကျောင်းသားတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မူကို ဖမ်းဆုတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ သူတို့သင်ကြားမယ့် ခေါင်းစဉ် နဲ့ အကြောင်းအရာကိုသာ ကျောင်းသားတွေထက်ပိုပြီးတော့ အလေးထားနေမိလို့ပါ။ ဒါဟာ ပထမဆုံး အမှားတစ်ခုကို သူတို့ဘယ်သူလို့ထင်နေတာတုန်း.....ဂျက်မားပေါ့...။
JACK MA ကတော့လေ...ပုလုပ်လိုက်မိတာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတွေက စာသင်ရာမှာ ဘယ်လိုအကျိူးကျေးဇူးရရှိမလဲဆိုတာထက် ၊ သူတို့ကို လမ်းညွှန်ပြသပေးမယ့် ဆရာတွေဆီကနေ သင်ကြားပြသမူအောက်မှာ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမူတစ်ခုကို ရရှိဖို့ လိုလားတယ်ဆိုတာ ဆရာဖြစ်သူက သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သင်ဟာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကိုသင်တော့မယ်ဆိုမယ်ရင် ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး ကျောင်းသားတွေကို တစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်ပါ။ A Headline isaPromise . ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကတိ တစ်ခုအဖြစ်သဘောထားရပါမယ်။ အဲ့ဒီကတိက ကျောင်းသားတွေကို ဘာတွေကျေနပ်ရောင့်ရဲမူကို ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ ကတိပါပဲ၊ ဥပမာ အားဖြင့် အမေရိကန် တော်လှန်ရေးအကြောင်း သင်ကြားမယ်ဆိုပါတော့ ဒါဆိုသင်က တကယ့်ထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ ထိပ်တန်းအမေရိကန်ခေါင်းစဉ်တွေအကြောင်း ပြောပြဖို့ လိုပါမယ်။ ပြီးတော့ ပြောင်းလဲမူတွေဖြစ်လာအောင် သူတို့ ဘာတွေကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့သလဲ၊ နောက်ပြီး ကုမ္ပဏီ၊ နိုင်ငံ၊ application ကအစ အသစ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ မူဝါဒတွေ ကျင့်သုံးလဲဆိုတာ ပြောပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒဏ်ရာရဲ့နာကျင်မူကို အကြိုခံစားစေပါ။
ဒုတိယ အထိရောက်ဆုံးသင်ကြားမူနည်းလမ်းကတော့ အောင်မြင်မူတွေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော်တော်တတ်နိုင်တာပါရှင်...
ရှင်တို့တွေ...ဆုံးရှုံးရရင် မလွဲမသွေကြုံရမယ့် ဒဏ်ရာနဲ့ နာကျင်မူပါ။ ဒဏ်ရာဆိုတာ လိုအပ်ခြင်းကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခုအဖြစ် အလေးပေးဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးပါ။ဒါကြောင့်ဒဏ်ရာတွေအကြောင်း စိတ်ကူးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းသားများကို မိတ်ဆက်ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမူရဲ့ အကျိုးဆက်ကို လည်း သိနားလည်အောင် ပြောပြဖို့ လိုပါတယ်။သင်ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတန်းက ဘယ်လိုမကောင်းတာတွေရှိနေမလဲဆိုတာ ကြိုပြီးလေ့လာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းဒါပဲနော်ညလဲနက်နေပြီ..အိပ်တော့မယ်ဒါကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆရာမတွေက ဒီနှစ်သင်ရိုးကတော့ ဘယ်လိုကောင်းတာမို့ မင်းတို့ တော့ စာကိုဘယ်လိုလေ့လာချင်စိတ်ရှိလာမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ အစပြုပြီး ပြောလေ့ရှိတယ်။ ဒါဟာ သင့်ရင်ထဲက လာတဲ့ စကားမဟုတ်မှန်း ကျောင်းသားတွေက ကြားရပါများလို့ရိုးလာပါပြီ။ တကယ်တမ်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရဲ့ ဆိုးချက်နဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို ကျောင်းသားတွေကို အမြည်းသဘော အနေနဲ့ နည်းနည်းလောက် ပြောပြပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Hollywood လိုကျင့်သုံးပါ၊ Hollywood ဟာ သူ့ဇာတ်ကားတွေ ပရိသတ်ဆီ မထုတ်လွှင့်ခင် အမြည်းသဘောအနေနဲ့
ဒီမှာကြည့်ကြ...You tube တို့ TV တို့မှာ preview အနေနဲ့ အကြိုပြသလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်ရဲ့ အသံကိုလည်းနားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်းကောင်းတွေကို ပရိသတ်က ကြည့်ချင်းလွန်းလို့ စောင့်မျှော်နေရတာကို သင်မမေ့သင့်ပါဘူး။ သင့် သင်ရိုးညွှန်းတန်းက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ chapter ဆီရောက်အောင် ကျောင်းသားက စောင့်မျှော်နေနိူင်တယ် ဆိုတာ သင် သိထားဖို့လိုပါတယ်
လျို့ဝှက်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ VAK နဲ့သင်ကြားပါ။ သင် စာသင်တဲ့ အခါ ရိုးရှင်းတဲ့ လျှို့ ၀ှက်နည်းတစ်ခုက VAK နဲ့ သင်ကြားဖို့ပါပဲ။ V- Visual အရာဝတ္ထုများကို အမြင်အာရုံဖြင့် ရူမြင်ခံစားစေပါ။ A- Audio အော်ဒီယိုဖိုင်များနဲ့ အရာဝတ္ထုများအကြောင်း နားထောင်ရင်းနဲ့လည်းသင်ကြားလို့ ရပါတယ်။နောက် ဘယ်ကိစ္စမဆို အကြောင်းရင်းမရွေးပဲ လှုပ်ရှားမူဆိုင်ရာ စက်မူပညာရပ်ခွဲ Kinesthetic အဖြစ်နဲ့ လည်း လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုပြီးတိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများကို တောင့်တမျှော်လင့်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ရမှာ ဆရာဖြစ်သူတွေရဲ့ သင်ကြားနိုင်သစွမ်းအရည်အချင်းကောင်းတွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာပါစေ။
Author - @babysister
history jackma story esteem writing
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by babysister from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.